सामुदायिक लघुवित्तको नाफामा ५६.९६% को बढोत्तरी, इपीएस रु. २४.४४
काठमाण्डौ । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा ५६.९६ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
प्रमुख वित्तीय सूचकमा गुराँस लघुवित्तको सन्तोषजनक प्रगति; खुद नाफामा २९१.३८% ले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी रु. १९.१७
काठमाण्डौ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा २९१.३८ प्रतिशतको छलाङ मार्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद...
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफामा १२४.८५% को छलाङ, जगेडाको आकार ३९.५५% ले बढ्यो
काठमाण्डौ । मुख्य वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा १२४.८५ प्रतिशतको छलाङ मार्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । अघिल्लो वर्षको...
कृषि विकास बैंकले २२% सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफामा १९.१५% बढोत्तरी
काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २२ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमास विवरणअनुसार बैंकले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा १९.१५ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ४ अर्ब २८...
स्वाबलम्बन लघुवित्तको खुद नाफा रु. ४२.२५ करोड, जगेडामा ६०.१४ प्रतिशतको छलाङ
काठमाण्डौ । मुख्य वित्तीय सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा २३.१७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही...
कुमारी बैंकले ११% सम्म लाभांश बाँड्ने सक्ने, खुद नाफा २८.०४% ले वृद्धि
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ११.१३ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ४ करोड...
आरएसडीसीको खुद नाफा ७१.२२% ले बढ्यो, जगेडामा १३६.७५% को छलाङ
काठमाण्डौ । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा २ करोड ६६ लाख रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७१.२२ प्रतिशतले बढी हो । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको...
स्वरोजगार लुघवित्तको खुद नाफामा १२०.६८% को छलाङ, जगेडामा ८८.३९% को वृद्धि
काठमाण्डौ । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा १२०.६८ प्रतिशतले छलाङ मारेको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन...
सिद्धार्थ बैंकले १८% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, नाफामा २१.२५% को वृद्धि, इपीएस रु. २६.५९
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकहरुमा प्रगति गर्दै सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १८.५८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफ आर्जन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकले २ अर्ब ३० खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको...
नेपाल बैंकले ६८ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खुद नाफा १८.७७ प्रतिशतले घट्यो
काठमाण्डौ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडका आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ६८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ। वितरणयोग्य मुनाफा र सेयर प्रिमियममा रहेको बाँड्न मिल्ने रकमबाट उक्त लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बैंकले बनाएको हो। चौथो त्रैमास विवरणअनुसार बैंकले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको नाफा ३१.०४ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी रु. ८२.१९
काठमाण्डौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफा १५.०६ प्रतिशतले बढाएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ...
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकहरुमा नयाँ नेपाल लघुवित्तको प्रगति सन्तोषजनक; खुद नाफामा १५६७% को छलाङ, जगेडामा १२२.९१% को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५६७.४१ प्रतिशतले छलाङ मारेको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जब कि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा ८ लाख रुपैयाँमात्र...
समीट लघुवित्तको खुद नाफा ४९.१५% ले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी रु. २८.४३
काठमाण्डौ । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा ४९.१५ प्रतिशतले बढोत्तरी गर्न सफल भएको छ । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...